Charlotte England | Frontier Myanmar
Charlotte isafreelance journalist based between London and Yangon. She writes in-depth political features withafocus on social justice, feminism, gender, protest movements, migration and development. She writes for the Guardian and VICE, among others.
Charlotte England ရေးသားသည်။
လိင်ခွဲခြားမှုကို တိုက်ဖျက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ
မအိ၏ လူပြောများသော အနုပညာ ကပြပွဲမှ မြင်ကွင်း တစ်ခု။ Charlotte England ရေးသားသည်။ ဓာတ်ပုံများ- Charlotte England “ကျွန်မက အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိရေးကို မွေးရာပါ စိတ်အားထက် သန်တယ်။ အမျိုးသမီတွေရဲ့ ထမီက ညစ်ပတ်တယ်ဆိုတဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာ စံနှုန်းတွေကို မေးခွန်းထုတ်တတ်တယ်။.